AKHRISO QISOONKA”14 BILYANEER OO NOLOL SABOOLNIMO AH KU SOO KORAY IYO SIDAY U TAAJIREEN UNA HELEEN HANTIDA ADDUUNKA UGU BADAN | Saxil News Network
AKHRISO QISOONKA”14 BILYANEER OO NOLOL SABOOLNIMO AH KU SOO KORAY IYO SIDAY U TAAJIREEN UNA HELEEN HANTIDA ADDUUNKA UGU BADAN
December 31, 2018 - Written by editor
Shakhsiyaadkan noloshooda hore faqiirnimada aadka u darran ka soo bilaabantay waxay tusaale u noqon karaan qof kasta oo nolol hoose ku nool, kaasoo ay dhiirigelin u noqonayaan inuu fikir cusub iyo ikhtiraac la yimaado si uu horrumar uga sameeyo noloshiisa. Shakhsiyaadka waxa horumar gaadhsiiyey shirkado ay aasaaseen oo maskaxdooda ay ka keeneen, kuwaasoo ay kaga mid noqdeeny dadka dunida ugu taajirsan, halka markii hore qaar badan oo ka mid ah ay cuni jireen cuntooyinka dariiqyada lagu tuuro. 14 Maalqabeen oo saboolnimo ku noolaan jiray waxa ay kala yihiin:
Koum: Aasaasaha Barnaamijka Whatsapp
Ninkan ka Madaxda ka ah shirkadda Facebook, isla markaana ka mid ah ragga sameeyey barnaamijka farriimaha la isugu diro ee WhatsApp waxay noloshiisu ka soo bilaabantay mid aad u hoosaysa oo waayada qaar isaga iyo qoyskiisuba quudan jireen cuntooyinka dariiqyada lagu daadiyo. Kouam oo sida wargeyska Forbes iftiimiyey hanti ahaan iskii u leh $6.8 bilyan oo doollar waa 37 jir, waxaannu markii uu 16 jir ahaa isaga iyo qoyskiisuba ka soo tahriibeen dalka Ukrian, iyagoo sharci darro ku soo galay dalka Maraykanka. Markay dalka Maraykanka soo galeen qoyskiisu waxay halgan ugu jireen siday cunto u heli lahaayeen, iyagoo Gudaafadaha cuntada ka guran jiray. Koum iyo saaxiibkii Brian Acton waxay ka wada shaqeeyeen in ay sameeyaan barnaamijka WhatsApp si ay ugula xidhiidhaan dadka, kaasoo waqtigan 450 milyan oo qof oo daafaha dunida kala joogaa isticmalaan. Shirkadda WhatsApp waxa uu oggolaaday dhawaan inuu $19 bilyan oo doollar barnaamijkiisan ka siiyo shirkadda Facebook. Ninkan waxa uu noloshiisa ka soo bilaabay meel hoose, isagoo qoyskiisa iyo shakhsiyadiisaba gaadhsiiyey meel aad u sarraysa, marna aan ka nasan horumarka uu sameeyey.
Aasaasaha Shirkadda Isgaadhsiinta ee Excel Communication:
Ninkan oo la yidhaa Kenny Trout wuxuu noloshiisa ku maarayn jiray in khataro naftiisa uu geliyo, kadibna uu qaato caymis, taasoo ay ugu wacnayd lacag la’aan iyo saboolnimo haysay, waqtiyada qaarna uu waxbarashada iskaga bixin jiray lacagtaas. Ninkan oo sida bishii September 2013 Forbes sheegay lacag ahaan ka haystay $1.7 milyan doollar, waxa uu lacagta jaamacadda Southern Illinoir kaga baxay isagoo naftiisa rahmi jiray. Ninkani waxa uu lacagtiisa inta ugu badan ka helay shirkadda telefoonnada ee Excel, taasoo uu aasaasay sannadkii 1988kii, caanna noqotay sannadkii 1996kii, laba sanno kadibna waxa uu Trout shirkaddiisa ka iibiyey shirkad la yidhaa Teleglobe oo ka siisatay lacag dhan $ 3.5 bilyan, waqtiganna waa hawlgab, waana maalqabeen weyn.
Waraysi wargeyska British Tabloid Mirrror uu la yeeshay Howard Schultz waxa uu ku sheegay; “Markii aan koray waxaan ku fikirayey in aan ku noolahay dariiq dunida ka mid ah. Waxa aan ogaa in dadka dariiqaya haystaa ay hanti badan haystaan, lacag badan leeyihiin, qoyskoodu faraxsan yihiin, mana garanayo anigoo sabool ah sababta fikirkaas aan u aaminsanaa, waxaanan doonayay inaan dayrkaas ka boodo, faqiirtinimadana ka baxo.” Ninkan waxa isaga iyo qoyskiisaba haysatay hoy la’aan, iyagoo ka mid ahaa qoysas ku jira guryo aad u liita, halka uu waqtigana ka yahay madaxa shirkadda Howard Schultz. Shakhsigan nolosha adduunyo horumarka ka sameeyey waxa uu ku guulaystay deeq waxbarasho oo uu ku helay kubbadda cagta oo uu xariif ku ahaa, waxaana u fidisay deeqdaas Jaamacadda University of Northern Machigan, markii uu qallin-jebiyeyna waxa uu ka hawlgalay shirkad la yidhaa Xerox, aakhirkiina waxa uu ka hawlgalay tukaan kafeega lagu cabo oo uu u bixiyey Starbucks, kaasoo waqtigaas shirkadda leh dunida ku lahayd 60 Tukaan, aakhirkiina waxa uu 1987kii noqday maamulaha guud ee shirkaddaas, waxaannu ballaadhiyey ganacsigii, isagoo dunida ka sameeyey 16,000 Tukaan oo dunida dacaladeeda ku kala yaalla.
Haweenaydii ugu horraysay ee Afrikanka Maraykanka u dhashay ah ee noqota wariye telefishan waxay ka dhalatay qoys sabool ah oo ku noolaa degaanka Mississippi ee dalka Maraykanka, taasina kamay joojin inay ku guulaysato hamigeeda waxbarasho, waxaanay heshay deeq waxbarasho oo Jaamacadda Tennessee State University u fidisay, waxaanay noqotay haweenaydii ugu horraysay ee Afrikaan madow ah ee weriye ka noqota telefishan, iyadoo da’deedu 19 jir tahay. Oprah oo xaalkeedii hore ahaa mid aad u xun oo aan xataa saddexda waqti mararka qaar heli jirin waxay waqtigan haystaa hanti dhan $2.9 bilyan doollar sida wargeyska Forbes ku soo saaray qiimaynta lacagta ay haysato bishii September ee sannadkii 2013kii. Haweenaydan ka mid ah haweenka dunida ugu lacagta badan ee madawga ah waxay sannadkii 1983 u guurtay magaalada Chicago ee dalka Maraykanka, iyadoo bilawday barnaamijka la yidhaa AM oo ah bandhig la qabto, kaasoo aakhirkii loo bixiyey magaceeda “The Oprah Winfrey Show.”
Ninkan waxa qoyskiisu noloshooda ku maarayn jireen markii uu yaraa shaqooyin aad u hooseeya, kuwaasoo meherado kafeega lagu cabo shaqaale ka ahaa, halka isaguna uu ka shaqayn jiray shaqooyin hoose, waqtiyada qaarna waalidkii waxay rahan ahaan u dhigeen gurigii ay ku jireen si ay nolol maalmeedkooda u helaan. Sannadkii 1968kii Langone waxa uu shaqo ka bilaabay shirkad korontada ah oo dawladdu leedahay, laba sanno kadib waxa uu la midoobay shirkad la yidhaa Bernard Marcus si uu guri uga iibsado, taasoo aakhirkii shirkadaasi sannadkii 1981 wixii ka dambeeyey u noqotay mid caan ah oo dunida laga yaqaano, waxaannu iminka hanti ahaan u haystaa $2.1 milyan sida lagu xusay Forbes bishii Sept sannadkii 2013kii.
Ninkan waqtigan ganacsadaha weyn ah waxa uu waqtiyada qaar hudheelada u maydhi jiray weelka, kaasoo saacasdii heli jiray $1.20 doollar, halka uu waqtigan ka haysto $308 bilyan sida wargeyska Forbes ku sheegay qiimayn uu sameeyey Sept 2013kii, Waqtigan waxa uu ka mid yahay dadka ugu taajirsan adduunka, kaasoo noloshiiisii hore ka soo tahriibay dalka Pakistan, kadibna galay Maraykanka, Jaamacadda Illinois oo uu dhigan jirayna iskaga bixin jiray lacagta uu ka helo weelasha uu hudheellada u xalo. Ninkan oo asal ahaan Baakistaan u dhashay waxa uu leeyahay shirkadda la yidhaa Flex-N-Gate oo ka mid ah shirkadaha ugu ballaadhan ee gaarka loo leeyahay ee dalka Maraykanka ka jira iyo sidoo kale kooxda kubbadda cagta wadanka Ingiriiska ee Fulham.
Ka-shing waxa uu ka yimi dhulka buuralayda baadiya ah, isagoo sannadkii 1940 soo galay magaalada Hong Kong ee dalka Shiinaha, waxaannu aabbihii geeriyooday isagoo 15 jir ah, kaasoo dugsigii uu dhiganayey iskaga tegay si uu u kafaalo qaado nolosha reerkooda oo aad fiqiir u ahaa. Sannadkii 1950kii waxa uu bilaabay wax uu shaqo kasta oo aad u hoosaysaba qabto inuu aasaaso shirkad u gaar ah oo la yidhaa Cheung Kong Industries, taasoo soo saarta bacaha balastiga ah, aakhirkiina ku fiday dunida badankeeda. Ninkan markii hore lacag la’aan dugsiga uu dhiganayey uga baxay waxa uu hadda haystaa lacag dhan $31 bilyan sida bishii March 2013 wargeyska Forbes sheegay, kaasoo ka mid ah tijaarta dunida ugu lacagta badan, halkii uu noloshiisii horena ka mid ahaa qoysaska ugu faqiirsan Shiinaha.
8. Harold Simmons:
Ninkani waxa uu ka mid yahay dadka ugu lacagta badan dunida isaga oo ku soo koray guri aan haba yaraatee lahayn laydh iyo biyo toona. Waxa uu nasiib u helay in uu fursad waxbarasho ka helo jaamacadda Texas waxaanu Maaster Degree ku diyaariyey cilmiga Dhaqaalaha. Wakhtigan hantidiisa waxa lagu qiyaasaa $40 Bilyan oo dollar waxaana shirkadihiisa laga xusi karaa Contran Corporation iyo Valhi, Inc oo shirkado ganacsi ah. Mr. Sammion waxa uu dhawaan ku geeriyooday da’da 82 jir, taasoo uu qoyskiisa uga tegay hantidaa badan.
Waxa uu ka mid yahay ragga adduunka ugu hodansan waxa uu haystaa in ka badan $15.3Bilyan Oo Dollar. Waxa uu ka mid ahaa shan caruur ah oo hooyadood u dirtay xarumaha lagu daryeelo agoonta iyo dadka saboolka ah ubadkooda. Markii uu waynaaday waa uu xoogsaday waxaanu isaga oo 32-jir ah furtay Tukaan Muraadayaha Indhaha iibiya inta uu soo amaahdo kadibna lacagta dib u celiya. Aakhirkii waxa uu yeeshay shirkad weyn oo Muraayadaha soo saarta.
Ninkan oo u dhashay wadanka Hungary waxa uu ka badbaaday markii Jarmalku qabsaday Hungary dagaalkii labaad ee dunida sannadkii 1947kii, kaasoo baxsadkii ku galay magaalada London ee dalka Ingiriiska. Dhallinyaranimadiisii Soros George Sorossed markii uu ka baxsaday ciidammada NAZI-ga waxa uu u tegay qoys ay qaraabo ahaayeen oo London degenaa, waxaannu waxbarasho ka bilaabay dugsiga dhaqaalaha lagu barto ee London School Of Economics, isagoo shaqana ka bilaabay mudalab Huteel, waqtiga u soo hadhayna wuxuu hagi jiray tareennada istaannada ku xidhanaya. Markii uu dhammaystay waxbarashadiisii sare waxa uu ka hawlgalay dukaan weyn, aakhirkiina waxa uu shaqo ka helay bangi ku yaal magaalada New York ee dalka Maraykanka sannadkii 1992kii, waxaannu sameeyey kumanaan bilyan oo dollar, haddana Hantidiisu waxa ay gaadhaysaa $20 bilyan oo dollar.
Taajirkani waxa uu wakhtigan ka mid yahay ragga ugu hanta badan dunida waxa uu haystaa 7.7-Bilyan oo dollar, waxa uu ku soo koray saboolnimo aad u hoosaysa. Laurent waxa uu ka qallin-jebiyey SchoRalph Laurenol oo ku yaal magaalada New York ee dalka Maraykanka, balse aakhirkii waxa uu ku saaqiday kulliyada ciidan oo uu galay, kaasoo aan dhammaysan kulliyadaas. Waxa uu shaqo ka helay shirkad la yidhaa Brooks Brother oo soo saari jirtay dharka qadiimiga ah, waana halka uu ka bilaabay riyadiisa ku aadan inuu samaysto shirkad tayada suudhka loo xidho farsamaysa, waxaannu sannadkii 1967 suuqa dunida ka iibiyey tayo qiimahood dhan yihiin $500,000 doollar, kadibna sannadkii ku xigay waxa uu bilaabay inuu aasaaso shirkadda la yidhaa Polo oo dharka samaysa.
Ninkan waxa iminka haysta shirkada dharka iyo alaabaha guryaha lagu qurxiyo soo saarta ee la yidhaa Kerin amma hore loo odhan jiray PPR, balse yaraantiisii waxa laga joojiyey waxbarashada dugsiga sare, sababtoo ah waxa uu ahaa nin aad u sabool ah oo awooddi waayey inuu agabka waxbarashada iibsado amma fiiga iska bixiyo. Shirkadihiisa waxa ka mid ah Gucci, Stella McCartny, Alexander McQueen iyo Yves Saint Laurent.
Waxa uu haystaa $3.9 bilyan waxa uu ka saaqiday dugsiga markii uu fasalka 8aad ku jiray si uu qoyskiisa oo danyar ah u caawiyo, una shaqeeyo, kaasoo meelo badan oo nolosha ah ka raadiyey dhaqaalaha. Markii uu koray waxa uu noqday feedhyahan, kaasoo loo biyey naanaysta ah Rifle Right Kerkorian (Qorigii Raygalka Dhabta Ahaa Ee Kerkorian), markii lagu guda jira dagaalkii 2aad ee adduunka waxa uu ka shaqeeyey ciidammada cirka Ingiriiska, taasoo ku hoggaamisay inuu aakhirkii dhisto hudheellada ugu waaweyn magaalada Las Vegas, aakhirkiina uu yeeshay ganacsiyo kala duwan oo ay hudheelladu ugu muhiimsan yihiin.
Ninkani waxa uu ku dhashay New York waxaana korsatay haweenay eddo u ah iyo adeerkii oo Chicago deggan. Markii edadii dhimatay wuxuu isaga baxay kulliyad waxaannu u guuray magaalada California si uu shaqo uga helo, 8 sannadood ayuu ka shaqaynayey shaqooyin aad u hooseeya. Waxa uu haystaa $41 bilyan oo dollar wuxuu aakhirkii aasaasay shirkadda barnaamijyada kombuyuutarada soo saarta ee la yidhaa Oracle, xilligaas oo ku beegnayd 1977-kii, taasoo imminka ka mid ah shirkadaha ugu ballaadhan ee dhinaca tiknoolajiyada.